SENDIKA SEMPAMA AO MORONDAVA : Mitohy ihany fitokonana faobe raha tsy mivaly ny fitakiana
Mitovy ny fitakian’ny mpampianatra rehetra manerana ny nosy dia mitohy ihany koa ny fitokonana faobe ao amin’ny distrikan’i Morondava hatramin’izao. 5 juin 2018
Raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana dia efa efatra herinandro izao ny fitokonana ary tsy hijanona raha tsy mahazo ny valiny mahafa-po izy ireo, hoy ny filohan’ny sendika. Ny fitakiana tambin-karama izay mbola tsy nijerena ary tsy notanterahina tao anatin’ny 4 taona izay ity mbola takiana ankehitriny ity satria fanaovana tsinontsinona ny mpampianatra, hoy ihany Lalason filohan’ny sendika ao an-toerana.
Manantena ny Minisitra vaovao ho avy eo indray ireto sendikan’ny mpampianatra ao Morondava mba hijery sy hamaha ny olana mamparary ny mpampianatra amin’ny sekolim-panjakana eto amin’ny Firenena ireto. Eo amin’ny toerana malalaka anoloan’ny lisea, izay antsoin’izy ireo hoe 90 ariary no hanatanterahana ny fitokonana ary isan’andro izany manomboka amin’ny 9 ora maraina hatramin’ny 11 ora.
Noho ny fitakian’ireto mpampianatra ireto dia tsy misokatra avokoa ny sekolim-panjakana ao an-tampon-tanànan’i Morondava, ny Epp sy Ceg ary lisea.